Booliska Soomaaliya oo Muqdisho ku toogtay Nin hubeysnaa | Banaadir Times
HomeWararBooliska Soomaaliya oo Muqdisho ku toogtay Nin hubeysnaa
Booliska Soomaaliya oo Muqdisho ku toogtay Nin hubeysnaa
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliiska Saldhiga Degmada Dayniile ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa la sheegay inay toogasho ku dileen Nin hubeysnaa oo la sheegay in uu dhac geystay.
Ninka hubeysnaa oo ku labisnaa Dareeska Ciidamada Millateriga ayaa goobjoogayaal sheegeen in dhalinyaro ku sugneed xaafada Raadeelka ka dhacay moobeelo, kadibna ay kusoo wargeliyeen, sidaasina Ciidamada ay ku toogteen xilli uu galay Guri ku yaal Xaafada Siisii ee isla degmada Deeyniile.
” Ninka markii uu mobeelada dhacay, dhalinyarada waay daba galeen Guriga uu galay ayay soo ogaadeen, sidaas ayay Ciidamada ugu sheegeen, balse markii uu isku dayay in uu iska difaaco Ciidamada ay toogteen ayuu yiri” Qof kamid aha dadka degan Xaafada Siisii ee degmada Deeyniile.
Sidoo kale Ciidamada Booliska ayaa waxaa la sheegay in Guriga Ninka la dilay laga soo qaaday Mobeelada iyo meydkiisa oo la geeyay Xarunta Hay’adda dambi baarista ee CID-DA ee Magaalada Muqdisho.
Laamaha Amniga degmada Deeyniile iyo Maamulka degmada weli wax faah faahin ah kama bixin flkaas, hayeeshee wuxuu kusoo aadayaa xilli qaar kamid ah degmooyinka obolka Banaadir ay kusoo bateen Kooxaha Burcasda ah ee dhacaya Mobeelada.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo ku wajahan Qardho & ujeedka oo la shaaciyay
Next articlePuntland oo Ciidamada uga digtay inay ku milmaan Siyaasadda